Manaraka faharoa vonjimaika amin’io fahavitrihan’ny mpifidy io ny Distrikan’i Midongy Sud, Faritra Atsimo-Atsinanana : 62.72%. Toerana solombavambahoaka tokana no ifaninanana ao. Valo ny kandida nifaninana tao.
Fahatelo vonjimaika ny Distrikan’i Betioky Sud, Faritra Atsimo-Andrefana manana taham-pahavitrihana 62.05%. Toerana solombavambahoaka tokana ihany koa no ifaninanana ao. Telo ny kandida nifaninana tao.
Laharana fahaefatra vonjimaika kosa ny Distrikan’i Befotaka Atsimo, Faritra Atsimo-Atsinanana : 60.12%
Toerana solombavambahoaka tokana no ifaninanana ao. Dimy ny kandida nifaninana tao.